Timor Andrefana: Miteraka tsy fahampian-tsakafo sy aretina ny orana · Global Voices teny Malagasy
Timor Andrefana: Miteraka tsy fahampian-tsakafo sy aretina ny orana
Voadika ny 03 Desambra 2010 4:09 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Tamin'ity taona ity, tsy niainana tahaka ny mahazatra ny fotoan'ny main-tany tany Timor Andrefana. Saika nahazo orana nandritra ny taona avokoa ny faritra rehetra, vokatry ny “La Niña” (miaraka amin'ny tranga ara-toetr'andro “El Niño” ). Niakatra tampoka ny rano tao Dili renivohitra. Potiky ny orana ny fambolena, ary ny tena ratsy indrindra dia tsy afaka hamboly amin'y faritra maro ny tantsaha amin'ity taona ity satria mbola sahirana mikarakara ny tany difotry ny orana.
Mpamboly mampiseho antontam-bary. Sary nahazoana alalana tamin'ny CC license avy amin'ny Flickr nampiasa ny sary avy amin'ny Firenena Mikambana
Timor Andrefana, amin'ny fotoana rehetra dia manafatra sakafo avy any ivelany, tsy afaka mamatsy sakafo mihoatra mantsy ny fambolena any an-toerana hamatsiana ny mponina ao aminy, miaraka amin'izao “fotoana sarotra” anelanelan'ny fambolena izao. Kanefa amin'ity taona ity dia mbola hiharatsy hatrany ny toe-draharaha.
Mpiasa ao amin'ny Mercy Corps Jim Jarvie manazava
Raha ny tena izydia miomana hatramin'ny roa volana ny fianakaviana tsirairay amin'ny sakafo izay voafetra ihany ho an'ny volana janoary sy febroary anelanelan'ny fiakaran'ny vokatra, kanefa vokatry ny toetr'andro hafa kely tamin'ity taona ity dia efa tsy manana hohanina sahady ny mponina efa volana maromaro lasa izay, ary miandry ny fiakaran'ny vokatra afaka efa-bolana indray raha manam-bitana kely. […]
Mba hanehoana ny faharatsian'ny zava-misy, mihotsaka ny lalana mampitohy ny faritra manodidina amin'i Dili renivohitra noho ny rano be mikoriana eo amboniny. Matetika tonga hatrany anaty hantsana izany. Zara raha misy ary matetika tsy misy mihitsy ny fanampiana ireo fianakaviana tafahitsoka amin'ireny toerana ireny. Ary tsy mahita lalana ry zareo.
Ilay mpitoraka bilaogy The Dili Insider mampahatsiahy ny zavatra tahaka izao niainana tamin'ny taon-dasa tany Timor Andrefana, mandra-pahatongan'ny sambo nitondra ny vary nafarana avy any ivelany.
Hatramin'ny taona 2006, nanafatra sy namatsy vary avy any ivelany foana ny fanjakana. tamin'ny taon-dasa, nisy mihitsy ny disadisa nahakasika ny fahazoana izany vary izany (jereo Global Voices’ tamin'ny 2009 mikasika ny “Disadisan'ny vary”). Tsy mazava mihitsy hoe ahoana no tsy hahatongavan'ny vary any ambanivohitra sy any amin'ny toerana mitoka-monina – ny ankamaroany dia masa any andrenivohitra sy any an-tanàn-dehibe daholo.
Raha jerena ny zava-tsarotra iainan'ny tantsaha any Timor Andrefana amin'izao fotoana izao, dia mahazo toerana indray ny fanafarana sakafo sy ny fahazoana izany sakafo afarana izany.
Mpitoraka bilaogy mpanohitra Tatoli mitsikera ny fifandonana misy eo amin'ny politikan'ny fanafarana vary [Tet] :
Ny vary tonga aty Timor an-taonina maro, maro amin'ny vahoaka anefa no tsy mahita izany akory. Mahantra ny mponina aty Timor, mbola miakatra be koa ny vidim-bary, kanefa Atoa Germano da Silva Lobato (vadin'ny minisitry ny fitsarana Lobato izay nahazo ny antoka amin'ny fanafarana vary) mandehandeha eran'ny tanàna amin'ny fiarabe Hummer, mamovoka ery, olo-mahantra.
Ilay mpitoraka bilaogy mpahay ekonomia Profesora Almeida Serra no milaza fa ny fiakarana nisy nandritra ny volana maromaro izay dia mifampitohy amin'ny famatsiana vary nafarana. Hoy izy nanoratra tamin'ny faran'ny oktobra [pt]
Ny tsy fahitana ny vokatra “vary an'ny MTCI (Ministry ny Fizahan-tany sy ny varotra ary ny Indostria)” eny an-tsena, fa nosoloina vary nafarana avy any ivelany no mampiakatra ny vidim-bary. Ohatra amin'izany ny tahan'ny fiakarana teo amin'ny varimbazaha sy ny vokatra azo avy aminy – raha voafetra ny an'ny vary, 13.1% no ilana vidiana – dia tafakatra 14.1%, 16%, 11.3% izany teo anelanelan'ny volana jona sy septambra.
Mpitoraka bilaogy milaza ny fiovana teo amin'ny governemanta noho ny vary. Lita ao amin'ny”Notisia Negosio” (Vaovaon'ny Fandraharahana) manoratra [Tet]
Tamin'ny volana oktobra, nampihena ny fidinany teny an-tsena ny ministry ny MTCI satria nomeny ireo mpandraharaha izany hahafahany mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka famonjena sy famatsiana ireo olona mipetraka any amin'ny toerana sarotra sy tsy mahita tsena (ambanivohitra sy mitoka-monina).
Zavatra tokana no mazava: kely fotsiny ny azo anaovana fahadisoana eo amin'ny resaka famatsiana sakafo any Timor Andrefana amin'ny ho avy rehetra.
Aretina vokatry ny kaikitry ny moka
Vokatry ny orana koa dia mitombo ny aretina afindran'ny moka tahaka ny tazomoka sy ny dengy. Milaza ny fampahalalam-baovao any an-toerana fa niakatra be ny isan'ny ankizy naiditra hopitaly tamin'ny volana oktobra [Tet], izay ambaran'ny marary sy ny hopitaly fa ny tsy fijanonan'ny orana no mety mahatonga izany.
Ny Fikambanana ara-pahasalamana misahana ny dengy any an-toerana no nilaza fa tamin'ny volana septambra dia nitombo avo roa heny ny marary raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ny fanambarany azy fohifohy:
Tsy mazava tsara ny firongatry ny aretina any amin'ny firenena hafa, kanefa ny toetr'andro misy dia azo inoana fa hampitombo ny aretina koa.
Nanangana tarika iray antsoina hoe Kondemal ny Ministry ny fahasalamana “hijery ny fomba mahomby hisorohana na hamongorana ny aretina mitranga rehefa fotoan'ny orana”. Ny fanambaran'ny Ministra ao amin'ny bilaogy [Tet]
Ny Kondemal dia handray fe-petra matotra hiadiana amin'ny trangan'aretina tsy fahita rehefa tonga ny fotoan'ny orana, handrindra ny asa miainga avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana mankany amin'ny mpandraharaha eny anivon'ny distrika sy ny manam-pahefana eny amin'ny kaominina hampihenana sy hamongorana ny aretina tahaka ny fanaovana fanadiovana, fanondrahana fanafody eny amin'ny rano miandrona sy ny hetsika hafa hatao eny amin'ny SISCA (toeram-pitsaboana mandehandeha].
Ny sary nalefan'i Taudevin tamin'ny 2006 mampiseho ireo mararin'ny tazomoka sy ny dengy tao Bairro Pite Clinic no mampiseho ny mahazava-doza ireo aretina ireo indrindra amin'ny ankizy.